Xusuus-qorkii ugu fiicnaa ee aan abid ka helo Boggeyga | Martech Zone
Xusuus-qorkii ugu fiicnaa ee aan waligay ka helo Blog-ga
Friday, May 18, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Bloggeygu waxoogaa dareen ah ayuu soo kordhiyay bilihii la soo dhaafay dadkuna waxay aad ugu naxariisteen faallooyinkooda. Xaqiiqda ah in dadku waqti u qaataan inay i siiyaan amaan ama mahadsanid waa wax laga naxo. Runtii way igu kicinaysaa inaan isku dayo inaan dadaal dheeraad ah galiyo qoraal kasta. Waxaan hayaa faallooyin faro badan tan iyo bilowgii baloogga, laakiin waa inaan kula wadaago warqaddan. Waxay gabi ahaanba iga dhigtay maalinteyda! Sidoo kale waxay markhaati u tahay saamaynta intee le’eg ee boggu yeelan karo. Kahor qoraalkan, xitaa ma aanan ogeyn in Mitch uu akhriste… fiiri qoraalkiisa:
Waxaan ahay aqriste waqti dheer ah kana mid ah macaamiisha balooggaaga. Waxaan rabay inaan emayl kor kuugu soo diro si aan kuu ogeysiiyo waxa aan wado.
Aniga iyo saaxiibkey, labadaba ardayda dhigata shahaadada hoose ee Jaamacadda McGill ee ku taal Montreal, Canada, ayaa hada bilaabay shirkad cusub oo ka taageerta macaamiisha khadka tooska ah. Waxaan u adeegsannay waxbaris badan bartaada si aan u horumarino shirkadan cusub ee aan leenahay.
Shirkadayada ayaa loo yaqaan ClixConnect waxayna bixisaa adeeg aad u casriyeysan oo lagu bixiyo taageerada macaamiisha khadka tooska ah. Waxa aan sameyno ayaa asal ahaan u fidiya adeeg sheekeysi toos ah oo toos ah oo loogu talagalay websaydhada dadka (adoo adeegsanaya badhanka yar ee lagu sheekeysto ee aad ku aragto boggaga internetka). Milkiilayaasha degellada ayaa ka jawaabi kara su'aalaha wadahadalka markii la heli karo, markayna la heli karin, qof ka socda xarunta wicitaankeenna ayaa ka jawaabi doona su'aalaha ayaga oo matalaya, 24/7/365.
Taasi waa kala bar hal-abuurnimada. Qaybta weyn ee hal abuurka leh ee 'ClixConnect' waa inaan sidoo kale ku helno tikniyoolajiyad cusub barnaamijkayaga barnaamijyada kaas oo awood u siinaya talooyinka iswada hadalka ee macaamiisha, kuna saleysan sheyga ay daawanayaan. Marka waxaad dhahdaa qof ayaa fiirinaya funaanad casaan ah websaydh, daaqad sheekeysi otomaatig ah ayaa u muuqan karta mid kugula talinaysa surwaal buluug ah iyaga.
Waxaan ku qaadanay qiyaastii 6 bilood tan, waxaana la shaqeynay dadka ku nool Kanada, Mareykanka, Romania iyo Pakistan si aan u bilowno.
Waxaan kaliya rabay inaan kuusoo wargeliyo fikradaha ku saabsan Martech Zone runtii waxay naga caawisay inaan soo gaarno halka aan maanta joogno, waana si daacad ah u soo dhaweyneynaa.
Mar labaad mahadsanid Douglas!
Jaamacadda McGill BCom 2008
Runtii waan ku qanacsanahay! Maxay tahay warqad layaableh. Kuuma sheegi karo inta ay le’eg tahay akhrinta qoraalkaasi aniga. Nasiib wacan Xiriiriyaha, Mitch! Waxaan doonayaa inaan hubiyo arjigaaga oo waxaan sii wadi doonaa inaan ku dadaallo inaan kuu soo gudbiyo waxyaabo kaa caawinaya!
Khajilaadaha Qaansada, Blogging, iyo Isgaarsiinta
May 18, 2007 at 9: 06 AM
Taasi waa mid aad u fiican, gaar ahaan ka timaadda ardayga. 18 bilood ka hor mid ka mid ah shaqaalahayga ayaa u baxay Dugsiga Qalinjabinta ee Yurub. Wuxuu booqday 4 usbuuc ka hor wuxuuna ii sheegay in nidaamka PR iyo xeeladaha ganacsi ee istaraatiijiga ah ee aan kula wadaagay shaqada halkan, ay ka siisay isaga faaiido awood leh oo tartan ah oo ka dhexeysa asxaabtiisa. Waqtigaas, isagu wax fikrad ah kama qabin.
Aad ayaan u qiirooday maxaa yeelay waa nin wanaagsan wax badana wuu qaban doonaa noloshiisa.
Waan hubaa inay jiraan dad kale oo badan oo halkaa jooga sida Mitch oo shaqadaadu awood u siisay.
May 18, 2007 at 9: 28 AM
Thanks Neil… faallooyinka iyo waraaqaha sidan oo kale ah ayaa runtii ka dhiirigelin badan gunno kasta. Runtii way fiicnayd in la akhriyo tan.
Inta badan balooggaygu wuxuu ku dhisan yahay faallooyin, markaa waxaan aaminsanahay inay tahay qoraal aan dhammaanteen ku wada dareem karno wanaag!
May 19, 2007 at 6: 34 AM
Isdhexgalka aan ka helo helitaanka faallooyinka ayaa ah qaybta ugu abaalmarinta badan ee qorista balooggeyga, waxayna iga caawineysaa inaan ku dadaallo dhanka wanaagsan oo ka sii fiican.
Waa sheeko weyn Doug, badeecada ay la yimaadeenna waa fikrad fantastik ah, xitaa waxaan ka fekerayaa adeegsiga mustaqbalka.
Xaqiiqdii waxaan u isticmaalay talooyin badan oo aad ku bixisay balooggeyga waxaanan hadda ku dhownahay 200 akhristayaasha (dhowr bilood oo keliya ka dib) feedburner, taasna qayb ahaan adigaa iska leh.
Sii wad shaqada wanaagsan,
May 19, 2007 at 9: 27 AM
Opal: Hooyo Vegan ah
May 21, 2007 at 6: 34 AM
Waan ogahay inay taasi dareen kaa dhigtay mid cajaa’ib leh! Faallooyinka noocaas ahi had iyo jeer waxay kaa dhigayaan kuwo qaas ah.
Waxaan ku hayaa qashin tiro badan bartaheyga qaar badan oo ka mid ah waxay iila soo diraan emaylka waqti ka waqti mararka qaarkoodna way soo baxaan
"Hadal" mararka qaarkood faallooyinkoodu waxay igu yeeshaan saameyn ka weyn tan kuwa ka imanaya akhristayaashayda joogtada ah sababtoo ah waxay ahayd gebi ahaanba lama filaan. 🙂
Waxaan kaliya helay boggaaga qiyaastii labaatan daqiiqo kahor. Waxaan horey u aqriyay inbadan oo kamid ah qoraaladaada horeyna waxaan kuugu calaamadeeyay / aan kugula xiriiray si aan usoo laaban karo markaan waqti badan helo.
Waxaan si dhab ah uga fikiray qaadashada balooggeyga heerka xigga iyo macluumaadka laga helo boggaga internetka, sida kuwaaga, waxay hubaal iga caawinayaan inaan riyadayda runta ka dhigo.
Anigu waxaan blog gareeyay muddo ka badan laba sano si kastaba ha noqotee, yoolalkeyga, bilihii la soo dhaafay ayaa isbedelaya.
May 21, 2007 at 6: 46 AM
Mahadsanid Vegan Momma! Waxaan hubin doonaa bartaada sidoo kale. Anigu ma ihi qof vegan ah, laakiin waxaan u hayaa ixtiraam aan caadi ahayn oo ku aaddan dadaalka ay u baahan tahay. Dabcanna waxaad tahay Hooyo, shaqada ugu adag agagaarka! Waxaan ahay Aabe keli ah sidaa darteed waxaan isku dayaa (oo aan ku guul daraystaa) inaan xirto labada koofiyadood.
La socodsii haddii aan kaa caawin karo wax kasta!
May 21, 2007 at 7: 06 AM
Xaqiiqdii waan weydiin doonaa su'aalo. Waqtigan xaadirka ah ma garanayo waxa aan weydiisto! Suuqgeynta, balooggeyga, wali aad bay iigu cusub tahay. Waxaan dhageysanayaa, aqrinayaa, oo baranayaa.
Waxaan ahay hooyo kaligeed ah haa waan ogahay waxa aad uga jeedo isku dayga inaad xirato labada koofiyadood. 🙂